Hawl-wadeennada Dalxiiska ee Tansaaniya ayaa 150 Milyan ku bixiyey Dagaalkii La-dagaalanka Ugaarsiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Hawl-wadeennada Dalxiiska ee Tansaaniya ayaa 150 Milyan ku bixiyey Dagaalkii La-dagaalanka Ugaarsiga
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Hubi Soo Bandhigidda Hawl -wadeennada Dalxiiska ee Tansaaniya
Ciyaartoyda Dalxiiska Tansaaniya ayaa malaayiin shilin ku shubtay barnaamij ballaaran oo ka hortagga ugaarsiga oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo dhaxalka duurjoogta ah ee duurjoogta ah ee xoolaha Afrika ee Seeraha Qaranka Serengeti.
Bannaanka weyn ee Serengeti wuxuu ka kooban yahay 1.5 milyan oo hektar oo savannah ah.
Waxay haysaa guuritaankii ugu weynaa ee haray oo aan la beddelin oo ah 2 milyan oo duurjoog ah oo lagu daray boqollaal kun oo cawsha iyo bahasha.
Dhammaantood waxay ku hawlan yihiin socod wareeg ah oo sannadle ah oo dhererkiisu yahay 1,000-km kaas oo ku socda 2-da dal ee deriska ah ee Tansaaniya iyo Kenya, waxaana ku xigay bahallayaashoodii.
Iyada oo ay hoos timaaddo Ururka Hawl-wadeennada Dalxiiska Tansaaniya (TATO), maalgashadayaasha dalxiiska ayaa soo saaray 150 milyan oo shilin (US $ 65,300) si kor loogu qaado barnaamij ka-xayuubin ah, iyagoo laba-laabay ballan-qaadkoodii dagaal dhiig ku daatay oo ka dhan ah ugaarsiga aamusan laakiin dilaaga ah ee dhacaya ee Serengeti.
Xoghayaha Joogtada ah ee Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Wasaaradda Dalxiiska, Dr. Allan Kijazi, ayaa sheegay in nolol-maalmeedkii saboolnimada horseeday ee ugaarsiga uu si tartiib-tartiib ah laakiin hubaal uga qalin-jabiyay dadaallo ballaaran iyo ganacsi, taasoo gelisay seeraha qaranka Tansaaniya ee Serengeti cadaadis cusub kadib 5 -sanado badan oo lulo ah.
Qaabkan ugaarsiga ee la ilaaway ee mas'uul ka ah dilalka baaxadda leh ee duurjoogta ee Serengeti ayaa ku kallifay daneeyayaasha dalxiiska inay galaan oo ay dejiyaan barnaamij ka-xayuubin badhtamihii Abriil 2017, iyada oo la raacayo qaabka Iskaashiga Dadweynaha iyo Gaarka ah (PPP) oo ku lug leh Jardiinooyinka Qaranka Tansaaniya (TANAPA) , Frankfurt Society Zoological Society (FZS), iyo naftooda.
Isagoo ku wareejinaya jeegga 150 milyan oo shilinka TATO ilaa FZS, hirgelinta barnaamijka ka-xayuubinta, Wasiirka Kheyraadka Dabiiciga iyo Dalxiiska, Dr. Damas Ndumbaro, ayaa ammaanay daneeyayaasha sida ay lacagtooda u dhigeen halka afkoodu yaallo.
“Waxaan si kal iyo laab ah ugu mahadcelinayaa TATO tallaabadan cajiibka ah ee ay ku taageertay [wadadan] ka hortagga ugaarsiga. Tallaabadan ayaa damaanad qaadi doonta ammaanka beerteenna qaranka ee qaaliga ah iyo duurjoogta aan qiimaha lahayn ee ku dhex jirta, ”ayuu yiri Dr. Ndumbaro. Waxa uu wacad ku maray inuu gacan qabad la yeelan doono TATO si loo sii dardargeliyo dadaalka ilaalinta iyo horumarinta warshadaha dalxiiska.
Guddoomiyaha TATO, Mr. Wilbard Chambullo, ayaa sheegay in ka hor inta uusan dillaacin COVID-19, hawl wadeennada dalxiisku waxay si iskood ah ugu tabaruci jireen hal doolar oo ay heleen dalxiise kasta, laakiin mowjadda masiibada awgeed, maalgashadayaashu waa inay xiraan xarumahooda oo ay diraan dhammaan shaqaalahoodii oo gurigoodii ku laabtay.
Dadaalkeeda adag ee ku aaddan badbaadinta, TATO, oo hoos timaada taageerada Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay (UNDP), ayaa samaysay kaabayaasha caafimaadka sida xarumaha ururinta saamiga ee COVID-19 ee Seronera iyo Kogatende ee Serengeti halkaas oo ururku ku soo bandhigay lacag dhan Sh40, 000 iyo Sh20,000 halkii muunad ee xubnaha TATO iyo kuwa aan TATO ahayn siday u kala horreeyaan.
"Annaga, TATO, waxaan si wadajir ah u go'aansannay inaan ku tabarucno lacagtii aan ka soo ururinnay xarumahan ururinta saamiga ee COVID-19 si kor loogu qaado barnaamijka ka-xayuubinta," ayuu Mr. Chambullo sharraxay, iyadoo ay sacab ka yimaadeen dhagaystayaasha.
Ficilku wuxuu leeyahay, arrimo kale, ayaa suurtogal ka dhigay, iyada oo ay ugu wacan tahay iskaashiga saddex -geesoodka ah ee UNDP, TATO, iyo dawladda iyada oo loo marayo Wasaaradda Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska iyo sidoo kale Wasaaradda Caafimaadka.
“Waxaan aad ugu mahadnaqayaa in lacagta aan maanta ku tabarucnay barnaamijka ka-hortagga uur-ku-jirta ay ka mid tahay… muhiimadda [iskaashiga] aan la leenahay UNDP, TATO, iyo Wasaaradda Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska, iyo sidoo kale Wasaaradda Caafimaadka , si kor loogu qaado soo -kabashada dalxiiska ee Tansaaniya, ”ayuu yiri Maamulaha TATO, Mr. Sirili Akko.
Barnaamijka De-snaring, oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah, oo ay hirgeliso FZS-oo ah hay'ad ilaalin oo caan ah oo caalami ah oo haysata in ka badan 60 sano oo waayo-aragnimo ah-ayaa loogu talagalay inay ka saarto dabinnada baahsan ee ay dejiyeen hilibleyda baadiyaha maxalliga ah si loogu dabin duur-joogta ballaaran ee Serengeti iyo dhaafsan.
Isagoo faallo bixinaya, Agaasimaha Dalka ee Frankfurt Zoological Society, Dr. Ezekiel Dembe, ayaa mahadcelin u jeediyay hawl -wadeennada dalxiiska sida ay fikradda ilaalinta u dhex -geliyeen qaab -ganacsiyeedkooda.
“Tani waa caado cusub oo ku wajahan beesheena ganacsiga si ay gacan uga geysato [waddada] ilaalinta. Hal -ku -dheggayadii 60 -kii sano ee la soo dhaafay wuxuu ahaa oo ahaan doonaa, Serengeti waligeed ma dhiman doono, waxaana ku faanayaa in hawl -wadeennada dalxiiska ay hadda ku soo biirayaan dadaalladeenna, ”ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Dr. Dembe.
Bilaabmay badhtamihii Abriil 2017, barnaamijka ka-hortagga uur-ku-taagga ayaa si guul leh loogu guulaystay in laga saaro guud ahaan 59,521 dabin silig, iyada oo la badbaadiyey 893 xayawaanka duurjoogta ah ilaa maanta.
Daraasadda FZS waxay muujineysaa in dabinnada siligga ay mas'uul ka yihiin dilka ballaaran ee 1,515 xayawaanka duurjoogta ah ee Seeraha Qaranka Serengeti intii u dhexeysay Abriil 2017 illaa Sebtember 30, 2021.
Markii ugaarsiga ugaarsiga ee Serengeti uu noqday mid baaxad weyn oo ganacsi ah, beerta qaran ee calanka Afrika ayaa hoos u dhacday cadaadis cusub si wax looga qabto dhibaatada kadib 2 sano oo hakad ah. Duurjoogta Serengeti, goobta Dhaxalka Adduunka, waxay bilaabeen inay ka soo kabtaan kaadh ugaadhsiga fool-maroodiga oo socday muddo toban sano ah, kaas oo ku dhowaad jilbaha u keenay maroodiga iyo wiyisha.
Machadka Cilmi -baarista Duur -joogta Tansaaniya (TAWIRI) ayaa sameeyay "Tirakoobka Maroodiga Weyn" ee 7 hab -nololeed oo muhiim ah laga bilaabo Maajo ilaa Nofembar 2014 markii la ogaaday in "rasaasta ugaadhsatada" ay dishay 60 boqolkiiba tirada maroodiyaasha 5 sano gudahood.
Tirooyinka dhabta ah, natiijooyinkii ugu dambeeyay ee tirakoobka ayaa shaaca ka qaaday in tirada maroodiga Tansaaniya ay hoos uga dhacday 109,051 sannadkii 2009kii oo ay noqotay 43,521 kaliya sannadkii 2014, taas oo ka dhigan hoos -u -dhac 60 boqolkiiba ah muddadii dib -u -eegista.
Sababta ugu badan ee hoos u dhacani waxay ahayd kor u kac weyn oo ugaadhsi ah meelaha la kontoroolo iyo kuwa furanba, taas oo Tansaaniya ay la daalaa -dhacaysay sannadihii la soo dhaafay in kasta oo aysan haysan kheyraad iyo farsamooyin ku filan.
Sida haddii taasi aysan ku filnayn, malaha hilmaanka duurjoogta ah ee la hilmaamay oo aamusan ee Serengeti Park ayaa hadda gelinaya guuritaankii duurjoogta ugu weynaa ee adduunka ee ka dhaca guud ahaan bannaanka Bariga Afrika khatar cusub.